Shina: Navoaka Avy Any Am-ponja Ilay Mpisolovava Li Zhuang · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2011 9:21 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Français, Italiano, Español, বাংলা, English
Vitsy ny any Shina no afa-mamaky ny tohin'ny tantaran'ireo nalefa any am-ponja noho ny raharaha politika, indrindra ny hahita izany ho misongadina indrindra ao amin'ny bilaogy fanta-daza Sina.
Saingy taorian'ny fahafahan'i Li Zhuang, mpisolovava monina ao Beinjing ny herinandro lasa teo fa nahazo sazy an-tranomaizina herintaona sy tapany noho ny fanohanany ny fihetsiketsehana manohitra ny kolikoly ao an-tanànan'ny sekreteran'ny Antoko Atoa Bo Xilai, dia izao no nataon'i Sina: nitondra ity lahatsoratra ity avy amin'ny mpisolovava voalohany Chen Youxi izay niaro an'i Li, sy nanome antsika sombim-baovao momba an'i Li— sy manome hevitra antsika ny toe-draharaha sy ny asam-pitsarana any Shina.
Sina ihany no taratra fa sehatry ny bilaogy lehibe tokana ao Shina nanome lanjany momba ilay lahatsoratra .
Chen nanoratra hoe:
Fantany tsara ny isan'ny olona miandry ao ivelany liana momba ny raharahany, sy ny vola lanin'izy ireo tamin'izany. Izany no midika fa tsy irery velively izy. Voakarakara tsara izy nandritra ny andro nijanonany tany am-ponja. Nanana boky novakiana izy ary afaka nijery sarimihetsika ; kanefa kosa, tsy navela hamaky vaovao na mandray taratasy mihitsy. Nanoratra tononkalo klasika maromaro izy, ary nisy vitsivitsy nianarany tsianjery aza izy, sy feony, heviteny mifanohitra sy fanoharana izay tsy ratsy. Nilaza izy fa nisaotra an'i Chongqing, noho ny nahafahany handinika zavatra maro sy hanarina ny tsy mety.
Tamin'ny folakandro, tonga ny ekipa mpiaro an'i Li mba hihaona aminy sy hiara-misakafo hariva ao amin'ny Oniversite Tsinghua ho fiarahabana azy. Efa nankany an-tranony an-trano ao Hubei i Li hamangy ny ray aman-dreniny ary niverina tao Beijing izy avy eo. […] Niresadresaka momba ny toe-draharaha omaly izahay, androany ary ny rahampitso. Salama vatana sy saina tsara i Li, ary mbola maresaka sy matoky tena toy ny taloha hatrany.
Naneho ny fankasitrahany tamin'ireo rehetra izay niahy ny mety hahazo azy izy, izay nahazo ny zavatra nolazainy sy nanohana azy nandritra izay herintaona sy tapany lasa izay. Mila miala sasatra mandritra ny fotoana maharitra izy ankehitriny, ary amin’izao fotoana izao dia handeha handinika ny tati-baovao mikasika ny zava-nitranga taminy izy izay natontan’ny zanany lahy, Li Yatong ho azy, tovolahy lava kokoa noho izy. Mila manarina ny fotoana rehetra very mikasika ny vaovao rehetra nisongadina nandritra izay herintaona sy tapany izay izy. Raha mbola tao an-tranomaizina izy, dia nisy nilaza taminy fa efa niala taminy sy nanadino azy ny olona rehetra, ka tsy nisy olona niahy izay nety nahazo azy intsony. Vao tamin’ny roa andro lasa teo anefa no nahafantarany fa efa fanta-daza ao Shina sy manerana izao tontolo izao izy. Mbola tsy takatry ny lohany mihitsy anefa izany rehetra izany. Dia tena nampiesonin’izy ireo tokoa izy.
Ny roa andro farany teo, niantso an’I Li an-tariby tsirairay avy ireo mpisolovava mpiaramiasa aminy
manerana ny firenena mba hirary soa azy. Maro koa ireo fampahalalam-baovao mikasa hiresadresaka amin’i Li, fa saingy tsy mandray antso an-tariby mihitsy I Li, kanefa mitovy avokoa ny fisaorany ny rehetra. Mila fanginana izy izao, fotoana hialana sasatra sy haharaka ny zavamisy indray. Fantany fa maro ireo olona lavitra izay tokony mbola isaorana. Ny fanontaniana mandreraka izay mbola apetraky ny olona dia ny ahafantarany raha mbola manana tantara mahaliana ho tantaraina i Li.
Tahaka ny androany, notantarainy avokoa ny zava-niainany sy ny nataony tamin'izany, nila niresaka ny momba azy taminay izy, Nifarana hatreo ny fisoloanay vava azy.
Na dia efa noafahana aza i Li Zhuang, mbola manahy foana aho. Nahafa-po ny asa nataon’ilay mpanao gazety ao amin’ny Southern Metropolis Weekly Li Tianqin, tao amin’ny fitantarany lava be mikasika ny ekipa mpiaro an’i Li Zhuang sy ny fomba niovan’ny fomba niovan'ny mpisolovava malaza ao Shina. Nanao asa mahafa-po tahaka izany koa ny fanitsiana ny fizarazarana ny lahatsoratra nataon'i Shen Yachuan, kanefa tsy mitovy hevitra aminy izahay tafiditra amin'ity tantara ity. Mbola mifatotra ihany ny mpisolovava ao Shina, fa tsy tahaka ny avandravandra tiana ampinoana anao amin'io lahatsoratra io. Raha vao malaza ianao dia manomboka ny fanorisorenana ary lasa mandao anao ny namana
Mila mandinika momba izany ny tontolon’ny fitsarana. Tokony asehony koa fa i Shina, aminy maha vondrona azy, dia nivoatra ka azo atokisana.
13 Jona 2011